Xasan oo qarameeyey maleeshiyada A/Madoobe - Caasimada Online
Home Warar Xasan oo qarameeyey maleeshiyada A/Madoobe
Xasan oo qarameeyey maleeshiyada A/Madoobe
Kismaayo (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa magaalada Kismaayo si rasmi ah daaha uga rogey hawlgelinta 1350 oo ka mid ahaa maleeshiyada Axmed Madoobe, kuwaasi oo laga dhigay ciidn qaran, islamarkaana qeyb ka ah barnaamijka heerka qaran ee isku dhafka Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Ciidammadan oo ayaa waxaa muddo laba bilood ah uu tababar uga socday dugsiga tababarka militariga ee magaalada Kismaayo, waxaana ay hoos imaanayaan Saldhigga 43-aad ee Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha oo hadal ka jeediyay munaasabadda, ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga ay laf dhabar u yihiin amniga qaranka.
“Muhimadda koowaad ee barnaamijkan isku dhafka Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxaa weeyaan in la helo ciidan ka kooban Soomaali oo dhan. Tababarka iyo dhaarta aad maanta halkan ku marteen waxay ka tarjumayaan in wixii maanta ka bilowda aad tihiin ciidan qaran, oo aadan ahayn ciidan beel ama gobol gaar ah ka socda. Ma tihiin wiilasha reer hebel, ee waxaad tihiin wiilasha qaranka Soomaaliyeed”, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sheegay in nasiib darro ay ahayd in wiilal Soomaaliyeed ay ku dhintaan dagaalladii sokeeye , iyagoo beelo u dagaalamaya, cid walbana ay haatan ka dheregsan tahay cawaaqib xumada laga dhaxley, waqtigan la joogana loo baahan yahay in laga fikiro dib u dhiska qaranka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale dardaaran u jeediyay ciidammada iyo guud ahaan shacabka.
“Waxaan idin ku baaqayaa inaan ka wada shaqeyno sidii sharciga iyo kala dambeynta loogu soo celin lahaa waddankeena. Waa inaan ka wada shaqeynaa sidii aan u yeelan lahayn dowlad xooggan oo dalka oo dhan adeegyada looga baahan yahay gaarsiin karta”.
Barnaamijka isku dhafka ciidammada ayaa ah mid heer qaran oo ay wadajir isaga kaashanayaan Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo maamullada ka jira dalka, waxaana ujeeddadu ay tahay in la helo ciidan heer qaran oo tayadoodu sareyso, kuwaas oo ka hawlgeli kara guud ahaan dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha JFS ka hor waxaa iyana halkaasi hadal ka jeediyay Madaxweynaha Maamulka KMG ee Jubba, Mudane Axmed Maxamed Islaan, Wasiirka Difaaca, S/Guuto Cabdulqaadir Shiikh Cali Diini iyo diblomaasiyiin.